Izinkolo eziningi zomhlaba zibaluleke kakhulu ngosuku lokuzalwa, ngoba lolu suku oluthinta ikusasa lomuntu esikhathini esizayo futhi linquma umphathi wakhe wasezulwini. Wonke umuntu oza kuleli zwe ngesikhathi sokubhapathizwa unikezwa i-Angel Angel ehamba naye empilweni, emvikela ekuhluphekeni futhi emqondisa endleleni yangempela. Isithombe somphathi wasezulwini yisisithombe-umlamuleli, okumele sibhekiswe emthandazweni ukuthola usizo nokusekelwa. Lesi sithonjana sinamandla amakhulu, singadonsela injabulo, uthando nokuchuma, futhi sikuvikele ezinkingeni nasezinkingeni.
Wazalwa phakathi kukaDisemba 22 noJanuwari 21
Umkhulumeli wakho uyisithonjana sikaMama kaNkulunkulu "uMbusi". Leli shrine elinamandla liye lasiza abakholwayo ukuba babhekane nezinkinga futhi badala izimangaliso eziningi, inkazimulo yayo idluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. Ngaphambi kwalesi sithonjana sithandazela impilo yomndeni nabangane, ukuze kutholakale insindiso evela ekuhlaselweni nasezimpi, ukuze kutholakale ukutholakala kothando nokuthula kwengqondo, futhi Bacela futhi usizo ezindabeni zezimali nezokuhle. Umphathi wakho wasezulwini nguSt. Seraphim waseSarov.
Wazalwa phakathi kukaJanuwari 22 noFebruwari 21
Umvikeli wakho nomsizi yisithonjana sikaMama kaNkulunkulu "Vladimirskaya". Lokhu kungenye yezithombe ezihlonishwa kakhulu eRussia izithombe zeVirgin, ezaziwa ngamandla ayo amakhulu. Isithonjana siyasindisa izifo zomzimba nezingokomoya, sikhuthaze umshado ojabulisayo, uqondise ngendlela eyiqiniso, unikeza amandla ezikhathini ezinzima zokuphila. Ngokuphindaphindiwe wasindisa amazwe aseRussia kusukela ekuhlaselweni kwezitha. Futhi abakhulumeli bakho basezulwini bangabantu abayingcwele abahlala e-Athanasius noCyril.
Wazalwa phakathi kukaFebhuwari 22 no-Mashi 21
I-patroness yakho isithonjana soMama kaNkulunkulu wase-Iberia ("Umlindi"). Ivikela indawo yokuhlala kubantu ababi, imililo, izikhukhula kanye nokuphanga, kukhulula ukuhlupheka ngokomzimba nangokwengqondo, kufisa ukuxazulula izinkinga zezezimali. Abavikeli bakho basezulwini bangcwele uSillyus noMilentius wase-Antiyokiya.
Wazalwa phakathi kuka-Mashi 22 no-Ephreli 21
Cela ukuvikelwa nokuncenga emfanekisweni kaMama KaNkulunkulu. Lesi sithonjana kumelwe sibe kunoma iyiphi indlu, ngoba iyisimangaliso esinamandla sokujabula komndeni. Lesi sithombe esisebenza ngokuyisimangaliso sishiywa ngotshini, futhi futhi sibusiswe ngabashadayo bokuphila okude nokujabulisayo. Kuhle kakhulu uma umshado uhambisana nosuku lokuhlonipha lesi sithonjana. Futhi uSaint Saint Guardian wakho unguSt. George the Confessor.
Wazalwa phakathi kuka-Ephreli 22 no-May 21
Ikheli ekukhulekeleni kwesithombe sikaMama kaNkulunkulu "Sporuchnitsa izoni". Usebenza njengesigceme phakathi kwamasonto angamaqiniso neNkosi uJesu Kristu futhi uveza uthando olungenamkhawulo weTheotokos esintwini esinesono. Lesi sithombe sizosiza ukuhlanganisa okholweni olungcwele, ukunqoba ukuphelelwa amandla okungokomoya nokugula okungokwenyama, ukuvikela ekusebenzeni izenzo ezingavamile. Umphathi wakho wasezulwini ungumphostoli ongcwele uJohane uMvangeli.
Wazalwa phakathi kukaMeyi 22 noJuni 21
Unemifanekiso eminingi yokuncenga - isithombe seMvali "Ukubulawa kwabafileyo" nokuthi "Ukushisa Bush". Thandaza kubo ngempilo yomndeni nabangane, ikakhulukazi izingane, mayelana nokuqeda izidakamizwa, imicabango engokwesono kanye nezilingo zesibindi. Umgcini wakho osezulwini ungu-Saint Alexius waseMoscow.
Wazalwa phakathi kukaJuni 22 noJulayi 21
Umkhulumeli wakho nomsizi uyisithonjana sikaMama kaNkulunkulu "Injabulo Yonke Intukuthelo". Lesi sithombe sinikeza ukuncenga nokusizwa ezindabeni zansuku zonke, sisekela ezikhathini ezinzima zokulila, ukugula nokugula, kusiza ukuhlupheka kanye nokungazi. Umkhulumeli wakho wasezulwini unguSyril Cyril.
Wazalwa phakathi kukaJulayi 22 no-Agasti 21
Uvikelwe yisithonjana esithi "Isivikelo seNdodana Ebusisiwe." Enye yezithombe ezihlonishwa kakhulu zikaMama kaNkulunkulu eRussia, okukwazi ukuvikela ezikhungweni nasebuthakathaka, zithanda ukuzuza uthando nomndeni wenjabulo, ephulukisa izifo zomzimba nezingokomoya, kukhulula imicabango engafanelekile nezenzo. Abavikeli bakho basezulwini bangcwele abaNtshonalanga Nikolai oyisoni kanye no-Ilya umProfethi.
Wazalwa phakathi kuka-Agasti 22 no-September 21
Umsizi wakho nomvikeli uyisithonjana sikaMama kaNkulunkulu "Ukukhathazeka." Kuzosindisa ikhaya ngemililo kanye nezinhlekelele zemvelo, ukukhulula izifo zomzimba kanye nokuhlangenwe nakho ngokomzwelo, ukuxosha imicabango emnyama, ukunikeza ithemba nokukholwa, ukuqinisa amandla omoya. Abanikazi bakho basezulwini bangcwele Saint Alexander, John noPaul.
Wazalwa phakathi kuka-Septhemba 22 no-Okthoba 21
Abanikazi bakho nabanikazi bakho bayisithonjana sikaMama kaNkulunkulu kaPochaev nesithombe "Ukuphakanyiswa kwesiPhambano seNkosi." Ezinye ze-Orthodox shrines ezihloniphekile kakhulu, ezisiza ukuphulukisa izifo ezimbi, ukunciphisa ukungabi nabantwana, ukusindisa ukukhwabanisa, umona nokukhwabanisa, zinikeze ukuthula nokuchuma emndenini, zivikele indawo yokuhlala kumasela nabantu ababi. Ingelosi yakho ye-Guardian kanye nomsizi wasezulwini nguSergius oNgcwele waseRadonezh.
Wazalwa phakathi kuka-Okthoba 22 noNovemba 21
Uvikelwe yisithonjana sikaMama kaNkulunkulu "Skoroposlushnitsa" - esinye sezidala kunazo zonke phakathi kwama-Orthodox shrines. Usiza ekulebeni okusheshayo futhi okuphumelelayo, ukwazi ukuvikela ingane eziguleni nasezigamekweni, ukunikeza ukuqonda okungokomoya nokucacile kwemicabango, uqondise ngendlela eyiqiniso futhi kukhuthaza isinqumo esifanele ezimweni zokuphila ezinzima. Umvikeli wakho wasezulwini ungumphostoli oNgcwele uPawulu.
Wazalwa phakathi kukaNovemba 22 noDisemba 21
Cela ukukhuleka emifanekiso kaMama kaNkulunkulu "Tikhvinskaya" no "Sign". Lezi zithombe eziyisimangaliso ziyakwazi ukunciphisa ukungabi nabantwana kanye nezifo ezingelapheki, futhi zikwazi ukusiza inkambo yokukhulelwa kanye nenqubo yokubeletha. Basiza ekusunguleni ubuhlobo emndenini, ukuvikela ikhaya kusuka kwamasela nasezigebengu, ukuvikela ukuhleba, ukuhlambalaza kanye nezintuthwane zezifiso ezimbi. I-patroness yakho yasezulwini nguSanta Barbara.
Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi amandla amakhulu emifanekiso yezithombe ngokuqondile kuxhomeke ekukholweni okungenakunyakaziswa kokuthandaza, ukwethembeka nokuhlanzeka kwemicabango yakhe eqondiswe eNkosini.
Ukugijima njengezemidlalo ewusizo kakhulu futhi efinyelelekayo
Ilayisi ne-ngulube, i-omelet nemifino
Isobho nge-zucchini kanye ne-mint
Ukudla konke okubandayo